पुरुषका यी बानीबाट टाढा भाग्छन् महिला, तपाईको पनि छ की ? | सुदुरपश्चिम खबर
पुरुषका यी बानीबाट टाढा भाग्छन् महिला, तपाईको पनि छ की ?
यदि तपाईं पनि कुनै महिलालाई प्रपोज गर्ने सोच बनाइरहनुभएको छ र चाँडै नै ती महिलाको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले यो खबर पढ्नुहोस्। कुनै पनि महिलालाई प्रपोज गर्नुभन्दा पहिले उनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ।
१) आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषः
महिला यस्ता पुरुषलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनन्। आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषबाट महिला टाढा भाग्छन्।
२) फ्लर्ट गर्ने पुरुषः
पुरुषमा फ्लर्ट गर्ने बानी सामान्य हुन्छ। यस्ता पुरुष जो सुकै महिलालाई देखेर उनीहरुसँग फ्लर्ट गर्न सुरु गर्छन् । यस्ता पुरुषबाट पनि महिला टाढा हुन्छन्।
३) सधैं प्रश्न गर्ने पुरुषः
पुरुषहरु आफ्ना प्रेमिकाप्रति निकै पोजेसिव भएको हामीले देखेका छौं। प्रेमिका कहिले कतिबजे कहाँ गइरहेका छन् उनीहरुलाई हरेक कुराको जानकारी चाहिन्छ। यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने पुरुष पनि महिलालाई मनपर्दैैन।
४) पुरुष मित्रसँग ईष्या गर्ने पुरुषः
धेरैजसो पुरुषलाई आफ्नी प्रेमिकाका पुरुष साथीहरु मन पर्दैन । ती महिला आफ्ना प्रेमीका लागि जतिसुकै इमान्दार किन नहोस् शंका गर्न छाड्दैनन् । प्रेमिकाको पुरुष साथीसँग जहिले पनि पुरुषले ईष्र्या नै गरेका हुन्छन् । यस्ता पुरुषले सधैं यो हेर्नुपर्छ कि उनको सामाजिक जीवनमा को छन् र को छैनन् । यदि तपाईंको पनि यस्तै बानी छ भने आफ्नो बानी सुधार्नुहोस्।
५) केयर नगर्ने पुरुषः
महिलालाई केयर गर्ने पुरुष निकै मनपर्छ। पुरुषको केयरिङ स्वभावले महिलालाई उनीहरुतर्फ आकर्षित गराउँछ । यसको विपरित यदि कोही पुरुषले उनीहरुको मेसेज र कललाई नजरअन्दाज गरेर त्यसको जवाफ दिएनन् भने यस्ता पुरुष महिलालाई मन पर्दैन। नयाँ पुस्ता बाट सभार